I-Semalt Expert Outline Izinhlobo Zokukhwabanisa Kwe-Inthanethi Nezindlela Zokuzigwema
I-intanethi iyisisetshenziswa esikhulu kuwo wonke umuntu. Amabhizinisi amaningi athatha i-theI-e-commerce platform njengendlela entsha yokumaketha. Ngewebhu, kukhona ithuba elingenamkhawulo nethuba lokuqala. Izinkampani ezinkulu zinayouthathe leli thuba futhi wenza amawebhusayithi amaningi. Amasu wokuthengisa afana ne-Search Engine Optimization asiza noma yikuphi ukuqala kokuqalisa ukukhishwa kwe-intanethifuthi uzimisele. Abantu namabhizinisi bangakwazi ukubona izinzuzo ezanele ezigidini ze-internets zekhasimende eziletha.
Nokho, njengoba abantu bacabanga ngokusetha amawebhusayithi, izigebengu ze-cyber ezifana nabaduni kanyeabakwa-scammers benza izinhlobo ezahlukene zokukhwabanisa kwe-intanethi ku-intanethi. Ngenxa yalokho, wonke umuntu kudingeka aqaphele lezi zinhlobo zobugebengu. Bangakwazi ukuthathanezimali eziningi, kanye nokwenza ezinye izenzo ezingekho emthethweni ku-intanethi.
u-Andrew Dyhan, ochwepheshe i-Semalt Amasevisi weDivimenti, uye wafanisa izinhlobo ezithile zokukhwabanisa kwe-intanethi okungabhekana nawe nezindlela ongayisebenzisa ukuze uzigweme.
1. Ukukhwabanisa ngamakhadi esikweletu
Abaduni abaningi bahlose amawebhusayithi okuthengisa namanye amapulatifomu e-inthanethi ngamakhadi esikweletu.Ukweba amakhadi esikweletu kunganikeza abaduni ukufinyelela kwizigidi zamadola amakhasimende. Ngaphezu kwalokho, bathengisa amakhadi esikweletu asebiwe ku-inthanethi enetheni elimnyamaizimakethe ezifana ne-Outlaw. Kubalulekile ukuqaphela izindlela zokuqapha ezifana ne-SQL Injection kanye nezinye izindlela ezenza ugwetshweukuphepha kokuthengiswa kwe-intanethi..Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukhuthaza amakhasimende akho ngezindlela lezi zigebengu ezisebenzisayo ukweba amakhadifuthi ugcine amakhadi abo esikweletu aphephile. Ngaphezu kwalokho, ulwazi lwendawo yekhadi kumasayithi athembekile kuphela.
2. Izikhwama nama-imeyili
Ama-imeyili ahlinzeka ngesiteshi esiphephile sokwenza abakwa-scammers bafinyelele imigomo yabo. Ngenyeamacala, angakwazi ukwenza iziphambano ezinkulu ezivumela abaqashi ukuba benze abantu balahlekelwe izinkulungwane zamaRandi online. Kufanele ugweme ama-imeyili azayokusuka emithonjeni engaqinisekisiwe. Kwezinye izimo, ungasebenzisa ezinye izihlungi zokugaxekile ezithuthukile ezikhona kwezinye izinhlelo ze-imeyili eziphephile. Izinyathelo ezinjalo ezilulakungaba ukuvikela ibhizinisi lakho le-e-commerce kusukela ekusebenzeni kwamakhohlisi e-intanethi nezinye izinhlobo zokuhlaselwa. Kufanele ugcine iwebhusayithi yakho mahhala kulezikanye nezinye izinhlobo zokuhlaselwa.
Lolu hlobo lokukhwabanisa lwe-intanethi lufaka phakathi ukukhohlisa ekunikezeni ulwaziikhasi eliyisikhohlisi. Iningi lokuhlaselwa kogaxekile liqukethe amakhasi wokuphanga kanye nezinye izinhlobo zokuxhumana ezilimazayo. Kwezinye izimo,abakwa-spammers bangafaka okunamathiselwe okuqukethe i-Trojans ku-imeyili. Lezi amagciwane zingenza imiphumela eminingi kukhompyutheni ehlosiwe njengesiphequluliukukhwabanisa. Futhi bangasebenzisa amasu wokuphanga ukuze baqondise abantu kumakhasi wokukhokha okukhohlisayo, angatshontsha ulwazi lwekhadi lesikweletu kwamanye amacala.
Kukhona zonke izinhlobo zabantu ngabanye ku-intanethi. Njengoba abantu benza zonke izinhlobo ezizuzisaukuqalisa ku-intanethi, abanye abantu abanezinhloso ezimbi benza izindlela zokwenza amacala abo. Ngokwesibonelo, abantu bahlala benamathuba okusizaabanye ngewebhusayithi yezentengiselwano. Ngakolunye uhlangothi, abaduni bangaphazamisa futhi bathathe imali kumakhasimende kanye nokudiliza isayithi. LokhuUmhlahlandlela ungakusiza ugweme ukukhwabanisa kwe-intanethi okungabhekana nawe njengokwenza imali. Ukuvikeleka kwewebhusayithi yakho kanye nokwekhasimende lakhoamanga ezandleni zakho Source .